चिनियाँ सेनाको कब्जामा भारतीय सैनिक ? भारतले गर्‍यो खण्डन - Sidha News
चिनियाँ सेनाको कब्जामा भारतीय सैनिक ? भारतले गर्‍यो खण्डन
एजेन्सी। लद्दाखमा चिनियाा सुरक्षाबलले भारतीय सेनाको गश्ती टोलीलाई नियन्त्रणमा लिएको खबरलाई भारतीय सेनाका स्रोतहरूले ख’ण्डन गरेको जीन्युजको अन्लाइन संस्करणमा छापिएको छ ।
भारतीय सेना र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिसका जवानहरूलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गत साता लद्दाखमा वास्तविक निय’न्त्रण रेखा नजिक भएको झैझगडापछि नियन्त्रणमा लिएको खबर आएको थियो । समाचारहरूमा आएबमोजिम, भारतीय गश्ती टोलीलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो र उनीहरूको हतियार चिनियाँहरूले खोसेका थिए । स्थानीय स्तरमा दुई पक्षबीच कुराकानी भएपछि मात्र उनीहरूलाई मुक्त गरिएको बताइएको थियो ।
चिनियाँ बलहरूले भारतीय भूभागमा अति’क्र’मण गरेको अनि पांगोङ तालमा डुंगाहरूका साथ आ’क्रा’मक गश्ती गरेको बताइएको थियो । वास्तविक निय’न्त्रण रेखामा त’ना’व बढ्दा दुवै पक्षले उक्त क्षेत्रमा सैनिक र हा’तहति’या’रको संख्या बढाएका छन् । झै’झ’गडा भएका ठाउँमा दुवै पक्ष उच्च सतर्क’ताको स्थितिमा छन् ।
भारतीय सेनाले भारतीय भूभागमा कुनै पनि किसिमको चिनियाँ अति’क्र’मण हुन नदिने र यी क्षेत्रहरूको ग’श्ती गर्ने बताएको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेना भारतमा प्रवेश गरेर भारतीय बलहरूसँग यदाकदा भि’ड’न्त गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक सकियो, यस्ता छन्
दशैँले पनि रोक्न सकेन परदेशीलाई,‘मन त
शान्ति स्थापना गर्न कंगो पुगेका नेपाली
सरकारको रेटमा परीक्षण गर्न सक्दैनौं;पीसीआर शुल्क
मन्त्री भट्टराईकाे राजीनामा माग्दै पर्यटन मजदुरहरु
चीनले हजाराैँ मानिसहरुलाई दियाे अप्रमाणित खाेप
हजारौं मानिसहरुको ज्यान बचाउने मुसालाई वीरता पुरस्कार
खाने पानीमा भेट्टियो मानिसको मस्तिष्क खाने जीवाणु
पहिलो हाफमा तीन गोल खायो, दोस्रो हाफमा उत्तिनै फर्कायो
बलात्कृत महिलालाई न्याय दिलाउन दुई करोडको जागिर छोड्ने वकिल
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन सर्वसधारणमा उपयोग गर्न डब्ल्यूएचओको अनुमति
वकिलको फिस तिर्न गहना बेचे, मसँग अब एउटा कार मात्रै बाँकी छ, भारतीय उद्योगपति अम्बानी
नाइजेरियामा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन लागु